Maxaa ka ka dhacay garoonka Muqdisho | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Maxaa ka ka dhacay garoonka Muqdisho
Muna Maxamed Shire oo uu adeer dhow u yahay Farmaajo ayaa 9-kii Feberaayo ka soo degtay garoonka Muqdisho iyadoo sidata Baasaboor Diplomacy.
Azhaar oo ah gabar joogtay qeybta Passport Control ayaa weydiisay aqoonsigeeda, hey’adda ay ka tirsan tahay in ay reebto Baasaboorka maadaama uu yahay midka dowladda ay sharci tahay in garoonka laguu reebo.
Hayeeshee Muna Maxamed Shire ayaa ku jawaabtay gacan ka hadal, waxaana kusoo baxay Arrintaan Booliiska oo xiray Muna, daqiiqado kaddib ayaa saldhigga Booliiska garoonka laga sii daayey, Madaxweyne Farmaajo ayaa ku amray Kulane Jiis in uu degdeg kusoo xalliyo arrintaas.
Saraakiisha Booliiska ayaa isku khilaafay cidda sii deysay Muna.
Azhaar waxaa awoowe u ah Madaxweyne Cali Mahdi, waxaana la sheegayaa in sababta gacan ka hadalka keenay ay tahay caddiifad qabiil, madaxweynihii Hore Farmaajo ayaa adeegsanaya wax ka baxsan sharciga dalka, waan arrin horseedi karta burbur hey’adaha dowladda.
Previous articleMadaxweyne Jubbland oo taageeray in shirka lagu qabto Muqdisho
Next articleGuldarada Siyaasad ku dhacday madaxweyne Farmaajo
. Dowladda Sucuudiga ayaa cambaareysay waxa ay ku tilmaantay “xadgudbka ay Israa’iil ku heyso Falastiiniyiinta” Wasiirka arrimaha dibadda Sucuudiga Feysal Bin Farxaan oo ka hadlayay shir...
Barcelona oo caawa guul muhiim ah gaartay
Ninka ku eedeysan in uu dharbaaxay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel macron, oo...